Tilmaamaha Khariidadaha Apple ayaa lagu dhisay Safari oo loogu talagalay mac | Waxaan ka socdaa mac
Javier Porcar | | Mac App Store, Tababarada
Codsiga Khariidadaha Mac waxay noqoneysaa mid aad iyo aad ugu habboon maalinba maalinta ka dambeysa. Waa muhiim inaan gacanta ku hayno codsi fiican hel meelaha xiisaha leh, laakiin way ka khuseysaa inaad na siiso macluumaad badan oo ku saabsan: isku xirka degelka, taleefanka, boostada, sawirradii ugu dambeeyay ee goobta, iwm
Sidaa darteed, Apple wuxuu go'aansaday inuu dhexgalo howlaha khariidadaha Apple Safari. Waa ikhtiyaar aan ku soo darnay macruufka, in kasta oo ay jiraan in badan oo inaga mid ah oo u adeegsada Mac-ka abaabulka iyo qorshaynta, oo macluumaadkan marwalba gacanta ku haya marka aan ugu baahanno iPhone-keena. Intaa waxaa dheer, kuwa naga mid ah oo aqoon u leh shaqadan macruufka ah, waxaan ku arki doonnaa waxyaabo badan oo isku mid ah nooca 'Mac'.
Si aan u aragno sida ay u shaqeyso, waa inaan furnaa Safari iyo korontada ku jirta bar cinwaanka macluumaadka aan dooneyno inaan helno. Tusaalahayga waxaan raadiyaa Magaalada Fanka iyo Sayniska Laga soo bilaabo Valencia. isla markiiba noo soo bandhigaysaa Xulashada khariidadaha sida xulashada raadinta.
Haddii aan riixno, a kaarka oo ay ku jiraan macluumaad. Tusaalaheena, waxaan aragnaa a wax yar oo ka mid ah barnaamijka Khariidadaha, halkee ku taal Magaalada Fanka iyo Sayniska, iyo sidoo kale masaafada aan joogo iyo marinka tooska ah ee goobtaan khariidadaha. Waxaan sidoo kale riixi karnaa wadada si aan ugu sheegno inay igu hagto meeshaas.
Haddii aan gujino cinwaanka ama marinka, goobtayadu waxay ka furmi doontaa Khariidadaha Apple, halkaas oo aan si sax ah uga heli karno barta gaarka ah ama u aragno dariiqa ay soo jeedisay Apple si loo gaaro bartaas.
Qeybta Jidka, Apple waxay tixgelin siin doontaa taraafikada waqtiga dhabta ah haa waa loo heli karaa aagga laga hadlayo. Waxaan sidoo kale nuqulan karnaa cinwaanka oo ku dhajin karnaa dhacdo taariikheed (khadka labaad "meesha") si uu noogu hanuuniyo goobta ay dhacdadu ka dhacayso, xitaa haddii aan karno, si aad noo soo ogeysiiso marka ay tahay inaan baxno iyadoo ku xiran hadba xaaladaha taraafikada ee xilligaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Astaamaha Khariidadaha Apple ayaa lagu dhisay Safari oo loogu talagalay mac